गत भदौ २ गते नेकपा एमाले विभाजित भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भयो । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी सरकारमा गयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री कहिले हुन्छन् फिर्ता ? पार्टी बैठकले गर्यो यस्तो बोल्ड निर्णय
गठबन्धनलाई मन्त्री हेरफरमा सकसः एकीकृत समाजवादीमा विवाद बढ्दा माओवादीमा पनि दबाव, के छ कांग्रेसको तयारी ?
महंगी बढाएर रेकर्ड ब्रेक गरेको देउवा सरकारलै के फेरी मन्त्री फेर्न लागेको हो ?